ခရစ္စမတ်နေ့ ဆယ့်နှစ်ရက် (သီချင်း) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖရက်ဒရစ် ဩစတင်မှ ရိုးရာတေးသီချင်းကို ပေါင်းစပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ခရစ္စမတ်နေ့ ဆယ့်နှစ်ရက် သည်အင်္ဂလိပ်ရိုးရာ ခရစ္စမတ်သံစဉ်အလိုက် ဖြစ်ပြီး ခရစ္စမတ်သံစဉ်အလိုက် ( တဦးစီအလိုက်သီဆိုသောသူများစုစည်းကာ ဖွဲစည်းသည့် အဖွဲ့များပေါ်ပေါက်လာပြီး)သံပြိုင်အဖွဲ့၊ ထိုအဖွဲ့များတွင်စာရင်းပေးသူများသည် ထုံးစံအတိုင်း စာရင်းကောက်ယူချက်အရ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွား၍ ခရစ္စမတ်နေ့မတိုင်မီ ၁၂ရက်အလိုမှ စတင်ကာ သီဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဖြင့် ထိုသို့သီဆိုမှုများသည် ခရစ္စမတ် နေ့ ဆီသို့ ဦးတည် ချီတက်လာခဲ့သည်။  ၁၇၈၀ ပြည့်နှစ်အထိ အင်္ဂလန်တွင်ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသော သီချင်း သို့မဟုတ် ကဗျာတစ်ပုဒ်ချင်းစီသည် ပြင်သစ်ဘာသာမှ ပြန်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရသည်။  "ခရစ်စမတ် နေ့ ၁၂ရက်"သည် ရူဒိုရိုးရာသီချင်အညွှန်း အမှတ် (၈၆) တွင် ရှိသည်။ စုဆောင်းဗားရှင်းများ၏တီးလုံးကွဲပြားသည်။ ယခုလက်ရှိ ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောသံစဉ်ကို ၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလိပ်တေးရေးဆရာ ဖရက်ဒရစ်အော်စတင၏ ရိုးရာတေးသီချင်းကို အခြေခံ၍ စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအရာနှင့်အလားတူသည်မှာ ရွှေလက်စွပ် ၅ ခု၊ မကြာသေးမီကပင်"ရွှေကွင်းငါးခု”) ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အမည်မသိ broadside, အန်ဂတ်စ်, နယူးကာဆယ်, ၁၇၇၄-၁၈၂၅
ခရစ္စမတ်နေ့ ဆယ့်နှစ်ရက် သည် သီချင်းများစုစည်းထားသည့်သီချင်းပေါင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာအခန်းငယ် တစ်ခုစီတွင် ခေါင်းစီးအခန်းငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းသီကုံးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်စမတ်နေ့ ၁၂ ရက်တွင်“ ကျွန်ုပ်၏စစ်မှန်သောအချစ်” မှပေးသောလက်ဆောင်ကိုဖော်ပြထားသည့်အခန်းငယ် (၁၂) ခုရှိသည်။ သီချင်းစာသားထဲမှာမူကွဲအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဤနေရာတွင်ပေးထားသောစာသားများသည် ဖရက်ဒရစ် ဩစတင် ၏ ၁၉၀၉ ထုတ်ဝေချက်မှဖြစ်ပြီးလက်ရှိ သံစဉ်အလိုက် ၏ပုံစံကိုပြသည်။  ပထမအခန်းငယ်သုံးခုတေးသွား၏ အပြည့်အစုံ စာသားကိုအောက်၌ ဤသို့ဖော်ပြထားသည်-
↑ Truscott၊ Jeffrey A. (2011)။ Worship။ Armour Publishing။ p. 103။ ISBN 9789814305419။ As with the Easter cycle, churches today celebrate the Christmas cycle in different ways. Practically all Protestants observe Christmas itself, with services on 25 December or the evening before. Anglicans, Lutherans and other churches that use the ecumenical Revised Common Lectionary will likely observe the four Sundays of Advent, maintaining the ancient emphasis on the eschatological (First Sunday), ascetic (Second and Third Sundays), and scriptural/historical (Fourth Sunday). Besides Christmas Eve/Day, they will observea12-day season of Christmas from 25 December to5January.
↑ Scott၊ Brian။ But Do You Recall? 25 Days of Christmas Carols and the Stories Behind Them။ p. 114။ Called Christmastide or Twelvetide, this twelve-day version began on December 25, Christmas Day, and lasted until the evening of January 5. During Twelvetide, other feast days are celebrated.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခရစ္စမတ်နေ့_ဆယ့်နှစ်ရက်_(သီချင်း)&oldid=497308" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၂:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။